Ngaba ukusebenzisa FS9 moya kwi FSX?
umbuzo Ngaba ukusebenzisa FS9 moya kwi FSX?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #248 by JanneAir15
Molo! Ndeva ukuba ungasebenzisa FS9 moya kwi FSX. Ndingayifumana moya ethile ukuba awukwazi ukufumana ngenxa FSX ukuze Ndithanda ukwazi ukuba kube lula ukuyisebenzisa kwi FSX. Lo moya Project Airbus A321 Sharklet version. Ndiye sele sazama ezinye iindlela ukuyifaka kodwa abazange wasebenza. Ngoko ke ukuba umntu ndicela nindincede le?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #252 by Gh0stRider203
ewe unga. kwezinye iifolda inokuba isuntswana ezahlukeneyo FSX kwe FS9. on FSX, yonke moya wam apha:
B: \_ Files Programme (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight mshini X \_ SimObjects \_ Iinqwelomoya
Andazi ukuba ukukhumbula ukuba apho ukufaka kwi FS9. Kwakhona isilumkiso nje enobulungisa. NOT zonke yokulinganisa for FS9 iza kusebenza FSX.
Ixesha ukwenza page: 0.216 imizuzwana